Mvura yanga ichishandiswa kutonhodza uye kupisa mweya mune yakagadziriswa-chubhu yekupisa kupisa maoil kubvira kubvira kutanga kwekudziya uye kutonhodza mhepo. Kutonhora kweiyo fluid uye iyo inokonzeresa coil kukuvara zvakare ave aripo akaenzana akareba nguva. Iri dambudziko rakarongeka iro kazhinji rinodzivirirwa.
Muchikamu chino, isu takanyora mashoma matipi anokubatsira iwe kudzivirira iyo yechando inotsemuka coil munguva yechando.
1. Kana chikamu chacho chisiri kushanda munguva yechando, mvura yese iri muchirongwa ichi inofanirwa kusunungurwa kuti idzivirire kukorobha.
2. Zvemamiriro ezvinhu echimbichimbi akadai sekudzimwa kwemagetsi kana kugadzirisa magetsi, damper yemhepo inofanirwa kuvharwa nekukasika kuti ive nechokwadi chekuti hapana mweya wekunze unopinda muchirongwa. Urume hausi kupombwa kuburikidza neiyo coil uye kudonha tembiricha mukati meAHU kunogona kukonzera kugadzirwa kwechando. Iyo tembiricha mukati meAHU inofanira kuramba iri pamusoro pe5 ℃.
3. Kuchenesa Coil uye firita yemvura nguva dzose. Zvinhu zvakanamirwa mupombi zvichikonzera kutenderera kwemvura kwakashata. Liquid musungo mu coil chubhu inokonzeresa kukuvadzwa kwecoil kana mamiriro echando aripo.
4. Isina kufanira kudzora system dhizaini. Mamwe masisitimu ekudzora anongogadzirisa kuvhura kwevhavha yemvura kwete fan yekumhanyisa kunoenderana neyemukati yekushisa tembiricha. Kushaikwa kwe fan fan inokonzeresa kushomeka kwemvura kutenderera uye yakakwira mweya vhoriyamu, zvichikonzera chando mvura mune coil. (Iwo mwero wemvura velocity mune coil inofanirwa kudzorwa pa 0.6 ～ 1.6m / s)
Iwo macircuit ekoil iko kumanikidzwa kunovaka, uye nenzvimbo isina kusimba mudunhu iro. Kuwedzeredzwa kuyedzwa kwakaratidza kuti kukundikana kunozoonekwa senzvimbo yakavharika mumusoro wehubhu kana kukombama kwakawedzera. Muzviitiko zvakawanda, ndiyo nzvimbo inozoputika.
Ndokumbira kuti uone pazasi kuti kumanikidzwa kuverengerwe nekuda kwechando chando.
ε = Kuwedzera Vhoriyamu (Mamiriro: 1 mhepo yekudenga, 0 ℃, huwandu hwe1 kg mvura)
ε = 1 ÷ 0.9167 ＝ 1.0909 (9% Kuwedzera kwevhoriyamu)
E = modulus yekusimba mukutambudzika (Ice = 2800 Kg / cm2)
Kumanikidza kwakashata ndicho chikonzero chekukuvara kwechando kune coil. Koil kukuvara nekuda kwemvura yemvura inotonhora inoenderana nekumanikidza kwakanyanya kunogadzirwa panguva yekuumbwa kwechando. Iyo nzvimbo ine chando ichi inongogona kubata iyi yekuwedzera kumanikidza kudzamara yasvika pamuganhu inokonzeresa kupisa exchanger kukundikana uye zvinotevera kutadza.
Kana iwe uine chero mibvunzo maererano nemhepo inobata yuniti kuchengetedza chando, bata Airwoods nhasi! Tiri kutungamira mupi wepasi rese wezvinhu zvitsva zveHVAC uye nekuvaka mhinduro yemhando yepamusoro kumisika yekutengesa neyemaindasitiri. Kuzvipira kwedu ndekwe kupa vatengi vedu zvigadzirwa zvakanakisa uye masevhisi nemutengo unodhura uye kugadzira nharaunda yekugara iri nani.
Post nguva: Jan-13-2021